Plasma 5.2 ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ Linux မှ
Ya ကျနော်တို့ KDE SC ၏ခေတ်သစ်၌ရှိကြ၏။ Plasma 5.2 ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်များနှင့် bug fixes များစွာဖြင့်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ပြောမည်။
1 နယူး Plasma 5.2 အစိတ်အပိုင်းများ
3 plasma 5.2 လက်စွဲစာအုပ်တပ်ဆင်
နယူး Plasma 5.2 အစိတ်အပိုင်းများ
ဤ Plasma ဗားရှင်းတွင် KDE ကိုပိုမိုပြီးပြည့်စုံသော Desktop ဖြစ်စေရန်အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
ဘူတိုဖြေ - အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကို Bluetooth ကိရိယာတွေကိုစီမံခွင့်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းပညာနှင့်လိုက်ဖက်သောကိရိယာများကိုသွားလာရန်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မောက်စ်၊ ကီးဘုတ်၊ ဖိုင်များပို့ခြင်း / လက်ခံခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
KSSHAskPassဖြေ။ ။ အခြားကွန်ပျူတာများကို ssh ဖြင့် ၀ င်ရောက်ပြီးယုတ္တိရှိသင့်သည်ဆိုလျှင်အသုံးပြုသူတွင်စကားဝှက်တစ်ခုရှိလျှင်၊ ဒီ module ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားဝှက်ထည့်ရန် graphical user interface ကိုပေးလိမ့်မည်။
Muonဖြေ - ဒီကိရိယာ (လူအများသိပြီးသား) နဲ့သင့်ကွန်ပျူတာအတွက်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့တခြား add-ons တွေကို install လုပ်နိုင်တယ်။
SDDM များအတွက် Configuration: SDDM သည် Plasma အတွက်ရွေးချယ်ထားသောမန်နေဂျာဖြစ်နေပြီး KDM အဟောင်းကိုအစားထိုးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဤ System Configuration module အသစ်ကသင့်အားအခင်းအကျင်းကိုပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
KScreen: ၎င်းသည်မော်နီတာများစွာအတွက်အထောက်အပံ့ကို configure လုပ်ရန် system configuration module တစ်ခုဖြစ်သည်။ (နောက်ပိုင်းပုံကိုကြည့်ပါ) ။
GTK application များအတွက်ပုံစံ: ဒီ module အသစ်ကသင့်ကို Gnome applications များ၏ themes များကို configure လုပ်သည်။
KDecoration- ဤစာကြည့်တိုက်အသစ်သည် KWin အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းတွင်မှတ်ဥာဏ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ သငျသညျအင်္ဂါရပ်ပျောက်ဆုံးနေလျှင်, စိတ်မပူပါနဲ့, ကပြန် Plasma 5.3 မှာဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Plasma ရှိ Widget တစ်ခုကိုဖယ်ရှားခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
KRunner ငါတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်လာသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဂီတဖွင့်စက်ကိုပင်ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးသောအခါ၎င်းသည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ပို၍ စနစ်ကျလာသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သော့ကိုပေါင်းစပ် အသုံးပြု၍ စတင်သည် alt + အာကာသ.
Kwin ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးသောကျွန်ုပ်တို့အသစ်၏ဆောင်ပုဒ်အသစ်နှင့်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင် cursors နှင့် icon အသစ်များရှိသည် လေချို (Brisa)၊ ကျနော့်အမြင်တွင် (icon များ) ထောက်ပံ့ရန်အတွက်များစွာသော application များမရှိသေးသော်လည်း။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ desktop အတွက် Widgets အသစ်၊ အခြားရွေးချယ်စရာ application menu (Kicker) သင်သည်မီနူးမှ application များကိုထည့်သွင်းပြီးတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်နိုင်သည်။ ချစ်သူ သငျသညျ optimization ရယခု startup မှာ CPU ကိုအများကြီးလျော့နည်းစားသုံးကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Krunner တွင် "type: Audio" ကိုရေးပြီးအသံရလဒ်များကိုစစ်ထုတ်ရန်အတွက် query analyzer သည်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များရှိသည်။
screen locker တွင်, logind နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ဆိုင်းငံ့ခြင်းမပြုမီ screen ကိုစနစ်တကျပိတ်ထားရန်သေချာအောင်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်နောက်ခံထားနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း၌၎င်းသည် Linux desktop ၏အနာဂတ်ဖြစ်သော Wayland protocol ၏အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။
မော်နီတာများစွာကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်တိုးတက်မှုများရှိပါသည်။ မော်နီတာအမျိုးမျိုးအတွက်စစ်ဆေးရေးကုဒ်ကို XRandR တိုးချဲ့မှုကိုတိုက်ရိုက်သုံးရန် portable လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဆက်နွယ်သော bug များကိုလည်းပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဤနှင့်အခြားတိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ထုတ်ပြန်ချက်များ.
အနည်းဆုံး ArchLinux မှာကျွန်တော်တို့ဟာ KDE 4.14 အဟောင်းကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ package အချို့ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ကိတ်, ထဲတွင် console ဖြစ်သည်ဥပမာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ KDE4 အတွက်အသုံးပြုသူရဲ့ settings ကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မယ် ~ / .kde4 /၊ အပလီကေးရှင်းအသစ်များအတွက်သူတို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည် ~ / .config / မင်္ဂလာပါ ဝီကီ ​​Arch.
လက်ရှိအချိန်တွင် ArchLinux တွင် Plasma 5.2 ကိုအပြည့်အဝ install လုပ်နိုင်မနိုင်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်မှတ်ပါသည်။ နောက်မှငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။
plasma 5.2 လက်စွဲစာအုပ်တပ်ဆင်
ငါ (ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘဲ) Antergos မှလက်စွဲစာအုပ်တပ်ဆင်ရုံပဲ, အခြေခံအားဖြင့်ဒီအရာအားလုံးကိုပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းလျောက်ပတ်စွာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါ install လုပ်ဖို့လိုအပျသညျ:
$ sudo pacman -xorg plasma-meta konsole plasma-nm kdebase-dolphin sni-qt kdemultimedia-kmix networkmanager အောက်စီဂျင် - gtk2 အောက်စီဂျင် - gtk3 အောက်စီဂျင် - kde4 အောက်စီဂျင်လေပြေ - kde4 kdegraphics - ksnapshot ကိတ်
KMix သည်အလုပ်မလုပ်သေးပါ။ ဤသည်ကား:
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Plasma 5.2 ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ၊ ဘာအသစ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ငါယခင်ဗားရှင်းများကို Archlinux တွင်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာများနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းများစွာရှိသည်။ KDE Plasma ကိုမကြာမီထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါက Antergos ကိုအခြေခံအဖြစ်တပ်ဆင်လိုက်ပြီးကံမကောင်းတာက Dolphin လို KDE 4.14 မှအရာများအပေါ်မှာမူတည်နေတုန်းပဲ။ အခုထိကင်းမဲ့နေတုန်းပဲ ..
ငါကဒီရင့်ကျက်တဲ့ Kde5ကိုစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မည်။ ယခု Kaos သည် kde 4.14.4 နှင့်အဆင်ပြေနေသည်
ကောင်းပြီ၊ ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်မှာ Anke က kf5 ကိုသွားမယ်လို့တွက်တယ်၊ kf5 နဲ့ plasma5ကိုပဲထားမယ်၊ အဲဒါက kde4ကိုဆက်မသွားတော့ဘူး။
ဤကဲ့သို့သောအရာများအတွက်ငါ ArchLinux လက်လွတ်။ သို့သော်ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ် Fedora တွင် KDE ကိုနှစ်သက်သည်။
တဖန်သင်တို့ကလုပ်ဖို့ကောင်းစွာလုပ်ပါ။ Fedora တွင် Plasma5ကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ, ငါ့ Arch applications များဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပ်သတိထားမိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ menu ကိုသုံးပါနှင့်ပြီးသား kwrite, Kate နှင့် konsole ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ အခုတော့ငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိသောအရာတစ်ခုခုရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် Andrea Scarpino ၏ကြေငြာချက်ဖြစ်သည် https://www.archlinux.org/news/transition-of-kde-software-to-the-kde-framework-and-qt-5/ အရာက Plasma 5.2 ဗားရှင်းကိုပြောင်းလဲရန်အကြံပြုသည်။
Plasma 5.2 ကိုပြောင်းရန်တကယ်ကောင်းပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမှာအဘယ်နည်း။ သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပိုကောင်းပါမည်လား။
ငါမှာသံသယတစ်ခုရှိတယ် ... မင်းသိလားသိလားကြည့်ရအောင် ...
Badoo မသုံးပဲ Plasma ကိုတပ်ဆင်လို့ရမလား။
ကောင်းပြီ, ငါသေးကောင်းစွာမသိရပါဘူး အပေါ်မှာငါ့မှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ .. 🙁
ကောင်းလိုက်တာ! အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်… Slds!
KDE တိုးတက်လာသည်နေ့တိုင်းကြည့်သည်။ ပြီးတော့ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကတောင်မှဒါကိုတောင်မပြောပါဘူး၊ အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ Microsoft နဲ့ Apple တို့ဟာသူတို့ရဲ့အတွေးအမြင်ကို KDE ဆီမှမခိုးဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အစဉ်အမြဲငါမြင်ဖူးသမျှအလှဆုံး KDE ကိုပုံမှန် layout ကို။
ငါလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအဆင့်မှာမသိရပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ငါ့အာရုံကိုဖမ်းစားလိုက်တယ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်ကောင်းနေတယ်၊ ​​mandriva ကနေငါဒါဂရုစိုက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး။
ငါတည်ငြိမ်သော kde5ဗားရှင်းစောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မယ်
kde4 သည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအတည်ငြိမ်ဆုံး desktop ဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ
Plasma5ကိုအသုံးပြုသောသူများအတွက် KDE 4.14 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိုးစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
သူတို့ကစားသုံးမှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားကြောင်းမှတ်ချက်ပေး။ ငါတစ်ပါတ် (ယခင် 5.1, 4) ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်, ငါကအလွန်ကောင်းစွာတုန့်ပြန်သတိပြုမိ, က KDE4 ထက်ပိုမိုအရည်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်မြင်ပေးခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာ kwin နဲ့ plasma chrashes အများကြီးရှိခဲ့တယ်၊ ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ကွန်ပျူတာရှိနေလို့ကောင်းတာမှန်မှန်လုပ်ပြီး KDE5.2 ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့4ကိုပြန်ကြိုးစားမယ်။ ဒါပေမယ့် KDEXNUMX လောက်တည်ငြိမ်ဖို့နည်းနည်းလေးကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။
KDE 4.14 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပလာစမာ5သည် RAM ကိုပိုမိုစားသုံးသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား 10GB ၏ ၁၀% ခန့်စားသုံးသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, ငါ၏ Arch အလွန်ကောင်းစွာလုပ်နေတယ်။
PS: Elav မှာပါ ၀ င်သောထင်မြင်ချက်ပါသောပလာစမာ (ပလာစမာ) အထုပ်ကိုသင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဟုထင်သည်။ အနည်းဆုံးမနေ့ကငါထည့်လိုက်တဲ့အခါငါလုပ်ခဲ့တယ်
sudo pacman -S ပလာစမာ Plasma-meta konsole kdebase-dolphin kate sni-qt breeze-kde4 k3b kdeutils-ark
…ဒါကရင့်ကျက်တဲ့ kde ၄.၁၄ လား။ ငါအနည်းဆုံး 4.14 သည်အထိအသုံးပြုလိမ့်မယ်။ သူကပြောတယ်!
ငါ ၁၅.၀၄ သန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်၊ NVIDIA GS15.04 ကဒ်နဲ့ပုံပြissuesနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်၊ သူကတပ်ဆင်ပြီးသွားတယ်၊ ပြီးတော့အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ရတယ်။ ငါ 7300 ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့ရသည်။
Ernesto Manriquez ဟုသူကပြောသည်
- 150 MB RAM သုံးစွဲမှုလျော့နည်းသည် (ပိုမိုစားသုံးသူများသည် KDE4 စာကြည့်တိုက်များဖွင့်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ စစ်ဆေးပါ)
- အရှိန်မြှင့်တင်ထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အတူအမြန်နှုန်းတိုးသည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှု Chrome ကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာရှိ၏ သူသည်ပုဂ္ဂလဒိively္ဌိအနေဖြင့် ၂၀ မှ ၃၀% ပိုမြန်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဖိုရမ်များတွင်သူတို့ပြောသောအရာများကိုပင်လုပ်ဆောင်နေသည့်တိုင်ဗန်းတွင် icon များစွာမရရှိနိုင်ပါ။ သင်ကြုံတွေ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်ယခင်ကတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတောင်မသိမ်းပါ။
ဥပမာအချို့သောဥပမာ - mega, bcloud, cloud mail ru
ပြီးတော့ငါထွက်ပြီးထည့်လိုက်ရင် configuration ကိုသိမ်းမထားဘူး။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောစက်ရုံသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Virtual Machine တွင် antergos ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ငါ tray ထဲရှိ icon အားလုံးကိုရပြီ။ ငါ install လုပ်သမျှကို install လုပ်ပါ။
မနေ့ကအလားတူတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့တာကကျွန်ုပ် / အိမ်မှ configuration ဖိုင်များအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ ငါ reboot လုပ်ပြီး voila, settings ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ မင်းပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုငါမစမ်းခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသိရင်အနည်းဆုံး MEGA ကနေတစ်ခု။ ငါသည်သင်တို့ကိုဖမ်းယူထားခဲ့ပါ။ https://plus.google.com/118419653942662184045/posts/cfPeo35HQ4j
ငါ NVIDIA GS7300 ကဒ်နှင့်အတူပြsolveနာကိုဖြေရှင်းသကဲ့သို့, သူက5၏သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ Plasma 15.04 ကိုတုံ့ပြန်ပါဘူး, ကအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ဖြစ်နေဆဲပင်။
ငါ kubuntu 15.04 ကို Plasma 5.3 ဖြင့် install လုပ်ပြီးပါပြီ။ တစ်ပါတ်အကြာတွင်၎င်းကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ open apks အမြောက်အများနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်ပြသနာအချို့ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ libreofice + amarok + Firefox သည်အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးပြတင်းပေါက်အပြောင်းအလဲများကိုနှေးကွေးစေသည်။
Ubuntu ၏ beta ဗားရှင်းမတိုင်မီကကျွန်ုပ်အားမိုက်မဲသောအမှားများကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ Firefox နဲ့ကျွန်တော်သဟဇာတမဖြစ်တာကိုငါနမ်းနေလို့ပါ၊
ငါ Plasma5ကို Lubuntu မှာ install နိုင်သလား။
MS Office မှ LibreOffice သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်နည်း